မန်ချက်စတာဒါဘီပွဲကို မန်ယူကွင်းလယ်လူ ပေါ့ဘာ လွဲချော်ပြီ
မန်ချက်စတာဒါဘီပွဲကို ဒဏ်ရာကြောင့် လွဲချော်မယ့် ပေါ့ဘာ Pogba
11 Nov 2018 . 10:29 PM
မန်ယူအသင်းရဲ့ အဓိက ကွင်းလယ်လူ ပေါ့ဘာ Pogba ဟာ ဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့် ဒီနေ့ညကစားမယ့် မန်ချက်စတာဒါဘီပွဲကို လွဲချော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပေ့ါဘာဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်နဲ့ပွဲမှာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး သောကြာနေ့က အသင်းရဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်ကို လွဲချော်ခဲ့တယ်။ ပေါ့ဘာအနေနဲ့ ဒဏ်ရာက ပြန်လည်သက်သာလာဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် မန်ချက်စတာဒါဘီပွဲမှာ ပါဝင်ကစားဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့တာကြောင့် ဒီပွဲကို လွဲချော်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မန်ယူနည်းပြမော်ရင်ဟို Mourinho ဟာ ပေ့ါဘာရဲ့နေရာမှာ ဖယ်လေနီ Fellaini ကို ပွဲထွက်ကစားသမားအဖြစ် အသုံးပြုမှာဖြစ်ပြီး အလက်ဆစ်ဆန်းချက်ဇ် Alexis Sanchez ၊ လူကာကူ Lukaku တို့ကိုလည်း အရန်စာရင်းမှာသာ ထည့်ထားပါတယ်။ ပေ့ါဘာ မပါတဲ့ မန်ယူအသင်း မန်စီးတီးကို အသာရနိုင်ပါ့မလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ . .
De Gea; Young, Lindelof, Smalling, Shaw; Matic, Herrera, Fellaini; Lingard, Rashford, Martial.
Photo:Premier League,Getty Images
မနျခကျြစတာဒါဘီပှဲကို ဒဏျရာကွောငျ့ လှဲခြျောမယျ့ ပေါ့ဘာ Pogba
မနျယူအသငျးရဲ့ အဓိက ကှငျးလယျလူ ပေါ့ဘာ Pogba ဟာ ဒဏျရာပွဿနာကွောငျ့ ဒီနညေ့ကစားမယျ့ မနျခကျြစတာဒါဘီပှဲကို လှဲခြျောမှာဖွဈပါတယျ။ ပေ့ါဘာဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ဂြူဗငျတပျဈနဲ့ပှဲမှာ ဒဏျရာရရှိခဲ့တာဖွဈပွီး သောကွာနကေ့ အသငျးရဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးအစီအစဉျကို လှဲခြျောခဲ့တယျ။ ပေါ့ဘာအနနေဲ့ ဒဏျရာက ပွနျလညျသကျသာလာဖို့ ကွိုးစားခဲ့ပမေယျ့ မနျခကျြစတာဒါဘီပှဲမှာ ပါဝငျကစားဖို့ မဖွဈနိုငျတော့တာကွောငျ့ ဒီပှဲကို လှဲခြျောမှာဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ မနျယူနညျးပွမျောရငျဟို Mourinho ဟာ ပေ့ါဘာရဲ့နရောမှာ ဖယျလနေီ Fellaini ကို ပှဲထှကျကစားသမားအဖွဈ အသုံးပွုမှာဖွဈပွီး အလကျဆဈဆနျးခကျြဇျ Alexis Sanchez ၊ လူကာကူ Lukaku တို့ကိုလညျး အရနျစာရငျးမှာသာ ထညျ့ထားပါတယျ။ ပေ့ါဘာ မပါတဲ့ မနျယူအသငျး မနျစီးတီးကို အသာရနိုငျပါ့မလားဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ . .